ANTANANARIVO RENIVOHITRA : Tokantrano 7 800 nahazo tohana avy amin’ny Fitondram-panjakana
Nitohy omaly nanerana ny boriborintany miisa enina, teto Antananarivo renivohitra ny fizaràna fanampiana ho an’ireo olona marefo ara-pivelomana iatrehana ny valanaretina covid-19. 4 août 2020
Raha atontaly dia tokantrano miisa 7 800 no nisitraka io fanampiana io, omaly fotsiny.
Ny 1 200 tamin’ireo dia avy ao amin’ny boriborintany voalohany, ka tetsy amin’ny ANS Ampefiloha no nizaràna azy, 600 avy ao amin’ny Boriborintany faharoa nozaraina teny amin’ny kianja Tsiadana Ampasanimalo, 12 000 avy ao amin’ny boriborintany fahatelo nozaraina tao amin’ny EPP Vohibola sy tao amin’ny CEG Antanimena, 1 800 avy ao amin’ny boriborintany fahadimy, nozaraina teny amin’ny Coliseum Atsonjombe ary ny an’ny 12 000 tao amin’ny boriborintany fahaenina nozaraina tao amin’ny Kianja filalaovam-baolina akaikin’ny toerana misy ny Masoivohon’i Etazonia.
Tonga teny amin’ny Coliseum Antsonjombe ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ny Governoran’ny Faritra Analamanga ary ny Ben’ny tanànan’Antananarivo, omaly nanatrika sy nanara-maso ny fizaràna ny fanampiana. "Ao anatin’izao fotoana sarotra izao, dia tonga eto amin’ity toerana ity izahay mivady sy ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny manatrika izao fizaràna fanampiana izao.
Anatin’ny fahasahiranana isika no tafahaona eto amin’ity toerana izay naorintsika ity. Eto no anehoako aminareo tsirairay avy ny firaisam-po, indrindra indrindra ny firaisankina satria ao anatin’ny fotoana sarotra no ahatsapana ny tena namana. Niteny anareo aho hatramin’izay hoe namanareo ary tsy hanary anareo aho ao anatin’ny fotoan-tsarotra. Izay no mahatonga antsika eto androany. Hitondra izao fanampiana izao ho an’ny isan-tokantrano, ho an’ny vahoaka tsirairay ary indrindra ho anareo manatrika etoana", hoy ny Filoha raha nandray fitenenana.
Tsy misy ahilika ireo sahirana
Ren’ny Fitondram-panjakana, hoy ny Filoha, ny fitarainam-bahoaka rehefa misy fizaràna fanampiana toy izao. Matetika ireo tena sahirana indray no tsy mahazo. Ireo olona mahitahita sy nampiandraiketina ny fizaràna no mamily izany ary maka ny fanomezana ho fananany sy an’ny fianakaviany. "Rehefa misy ny fizaràna toy izao dia ireo olona tena mila matetika no tsy nahazo na tsy tonga tany amin’ireny olona ireny. Hamafisiko ankehitriny fa ny olona izay tena anatin’ny filàna, anatin’ny fahasahiranana anatin’izao valanaretina izao dia tsy misy ahilika fa hahazo ny anjarany avokoa, ka isan’izany ianareo ato anatin’ny boriborintany fahadimy", hoy ny nambarany.
Mariky ny fitiavana
Ity fanomezana vary iraky kitapo, Cvo, menaka roa litatra, ronono ambifotsy roa boaty, savony, paty ho an’ny fianakaviana nozarain’ny Fitondram-panjakana ity dia fanomezana nomena natao haharitra anatin’ny tokantrano iray, izany hoe tsy vary iray kilao na roa kilao na dimy kilao, araka ny fanomezana hatrizay nahazatra, fa nofenoina iray kitapo avy mba tsy hivoahan’ny fianakaviana sahirana ny trano intsony ao anatin’izao fihibohana noho ny hamehana ara-pahasalamana izao. "Mariky ny fitiavana izao fanomezana izao, araka ny nolazaina dia ny fitiavana no lehibe indrindra, ka izay no fitiavana omenay anareo mba hahafahantsika miaro tena dia nasiana ihany koa ny tambavy CVO, ny irariana dia ny ho salama hatrany isika rehetra mba hahafahantsika mifanome tanana hampandroso ity tanindrazana malalantsika ity", hoy hatrany ny lahatenin’ny Filoha.
Tsy handeferana ireo manodina ny fanampiana
Ankoatra ireo, nanome toromarika koa ny Governoran’ny Faritra Analamanga, Hery Rasoamaromaka, mikasika ny fizaràna fanomezana avy amin’ny Fitondram-panjakana tahaka izao. Tokony homena fanampiana ary tsy maintsy atao mahazo avokoa, hoy ny Governora, izay heveriny fa fianakaviana marefo. Na tsy voasoratry ny tompon’andrakitra anaty lisitry ny fokontany aza ka voaporofo fa tena marefo ara-pivelomana. An-kilan’izay dia nambarany koa fa tsy maintsy ampiharina amin’ireo tompon’andraikitra manodina fanampiana ny sazy mafy, araka izay voalazan’ny lalàna. "Tsy handeferana intsony ireo izay tratra manodina fanampiana, betsaka ny fitarainana re mahakasika io fizaràna fanampiana io. Efa mandeha amin’izao fotoana ny fanadihadiana mahakasika ireny ary manome toky izahay fa hosaziana izay tratra. Mazava ny toromarika nomen’ny Filoha, ireo marefo sy tena sahirana no omena dia izay no tsy maintsy arahina", hoy ny Governoran’ Analamanga.